Ao anatin’ny heloka
« Ary mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay » Mat. 6:12
Misy fitahiana lehibe eto izay angatahina miaraka amin’ny fepetra. Ny tenantsika mihintsy no manambara ireo fepetra ireo. Mangataka isika mba handrefesana ny famindrampon’Andriamanitra amintsika araka izay famindrampo izay asehontsika amin’ny hafa. Nanambara i Krity fa izao no fepetra ifaneken’Andriamanitra miaraka amintsika: “Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo Izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo”. Mat. 6:14,15. Fehezanteny mahafinaritra! Saingy akory ny fahakelezan’ny fahatakarana na ny fivelomana izany. Iray amin’ireo fahotana mahazatra indrindra ary iray izay ahitana vokatra tena mandoza indrindra , ny fileferana amin’ny fanahy tsy mahay mamela. Firifiry akory no manka-mamy habibiana na valifaty ary avy eo miankohoka eo anatrehan’Andriamanitra ary mangataka mba havela tahaka izay namelany. Azo antoka fa tsy azon’izy ireo ny tena heviny marina anononana io vavaka io raha tsy izany dia tsy ho sahy nilaza izany tamin’ny molony akory izy. Miankina tanteraka amin’ny famindrampon’Andriamanitra mamela heloka isan’andro sy isan’ora isika; ahoana ary no ankamamiantsika fangidiana sy gevi-dratsy amin’ireo namantsika mpanota!
Ny maha eo ambany fanerena mavesatra ho an’i Kristy antsika dia mametraka antsika ho eo ambanin’ny fanerena masina indrindra ho amin’ireo izay nahafatesany mba havotana. Tokony haneho fiombonam-po mitovy amin’izy ireo isika, fangorahana sy fitiavana tsy tia tena mitovy amin’izay nasehon’i Kristy tamintsika.
Izay tsy mamela heloka dia manapaka tarangana ilay hany fantsona tokana hahazoany famindrampo avy amin’Andriamanitra. Tsy tokony hihevitra isika hoe raha tsy efa niaiky heloka ireo izay nandratra antsika vao hamela heloka azy ireny isika. Anjarany izany, tsy isalasalana, ny hanetry ny fony amin’ny fibebahana sy ny fiaiken-keloka; saingy tokony hanana fanahin’ny fangorahana amin’ireo izay manao ny tsy miteny amintsika isika, na miaiky ny fahadisoany izy na tsia. Nety ho tena nandratra antsika lalina tokoa azy ireo, nefa tsy tokony hikolokolo ny fitarainantsika isika na halahelo ny tenantsika noho ny zava-manjo antsika; fa toy ny hanatenantsika ny ho voavela heloka noho ny fandikan-dalàna nataontsika tamin’Andriamanitra no tokony hamelantsika ireo rehetra nanao ratsy tamintsika.
Isika ihany koa dia tokony haneho ny Fahasoavany amin’ny hafa.